Tebhenekeri Yemunguva yaMozisi | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Kabiye Kabuverdianu Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Mozisi paakanga ari paGomo reSinai, Jehovha akamuudza kuti avake tende rinokosha chaizvo rinonzi tebhenekeri, kuti vaIsraeri vazonamatira Jehovha imomo. Vaizokwanisa kutakura tebhenekeri vachienda nayo kwese kwavaienda.
Jehovha akati: ‘Udza vanhu kuti vape zvavanenge vachikwanisa kuitira kuti vabatsire kuti tebhenekeri ivakwe.’ VaIsraeri vakapa goridhe, sirivha, mhangura, matombo anokosha, uye zvishongo. Vakapawo shinda, rineni, matehwe emhuka nezvimwe zvakawanda. Vakapa zvakawanda chaizvo zvekuti Mozisi akavaudza kuti: ‘Zvakwana! Chiregai kuuya nezvimwe.’
Varume nevakadzi vakawanda vaiva neunyanzvi vakabatsira pakuvaka tebhenekeri. Jehovha akavapa uchenjeri hwekuti vagone kuita basa racho. Vamwe vaiita zvekuruka neshinda, kusona machira, kana kumenda. Vamwe vaiveza matombo, vaishanda negoridhe kana kuti vaiveza matanda.
Vanhu vakavaka tebhenekeri vachinyatsotevedzera zvavakanga vanzi vaite naJehovha. Vakagadzira keteni rakanaka kuti rikamure tebhenekeri kuita mativi maviri, Nzvimbo Tsvene uye Nzvimbo Tsvenetsvene. MuNzvimbo Tsvenetsvene maiva neareka yesungano iyo yakanga yakagadzirwa nemuti wemubayamhondoro negoridhe. MuNzvimbo Tsvene makanga muine chigadziko chemarambi chegoridhe, tafura uye atari yekupisira rusenzi. Muchivanze maiva nebheseni hombe remhangura uye atari hombe. Areka yesungano yaiyeuchidza vaIsraeri nezvevimbiso yavakanga vaita yekuti vaizoteerera Jehovha. Unoziva here kuti sungano chii? Ivimbiso inokosha.
Jehovha akasarudza Aroni nevanakomana vake kuti vashande patebhenekeri sevapristi. Vaifanira kuchengeta tebhenekeri yacho zvakanaka uye ikoko ndiko kwavaifanira kupira zvibayiro kuna Jehovha. Mupristi mukuru chete, Aroni, ndiye aibvumidzwa kupinda muNzvimbo Tsvenetsvene. Aiita izvi kamwe chete pagore kuti ape chibayiro chezvivi zvake, zvemhuri yake, uye zvevaIsraeri vese.
Papera gore kubva pavakabuda muIjipiti, vaIsraeri vakapedza kugadzira tebhenekeri. Iye zvino vakanga vava nenzvimbo yekunamatira Jehovha.
Jehovha akafadzwa netebhenekeri, akabva aita kuti gore riuye pamusoro payo. Chero bedzi paiva negore pamusoro petebhenekeri, vaIsraeri vairamba vari pavainge vari. Asi gore paraisimuka, vaiziva kuti yakanga yava nguva yekuti vatame. Vaiputsa tebhenekeri vobva vatevera gore racho.
“Ndakabva ndanzwa inzwi guru richibva kuchigaro cheumambo richiti: ‘Tarirai! Tende raMwari riri pakati pevanhu, iye achagara navo, uye ivo vachava vanhu vake. Mwari pachake achava navo.’”​—Zvakazarurwa 21:3
Mibvunzo: Jehovha akaudza Mozisi kuti avakei? Jehovha akapa Aroni nevanakomana vake mabasa api?
Eksodho 25:1-9; 31:1-11; 40:33-38; VaHebheru 9:1-7
Homwe Yepachipfuva yoMupristi Mukuru
Paunenge uchipenda mufananidzo uyu edza kufungidzira zvainge zvakaita homwe yomupristi mukuru.